Dariiqa Saxda Ah Ee Lagu Muujin Karo Kala Fogaanshaha - Weerarkii Titan - Muuqaalka Cradle
Saxiib Jeans waxa dafay Titani
Dariiqa Saxda Ah Ee Lagu Muujin Karo Kala Fogaanshaha - Weerarkii Titan
by DIMA 20th October 2021 16th November 2021
Leave a Comment Jidka Saxda ah ee lagu Muujin karo Kala-duwanaanshaha - Weerarka Titan
WAA LAGU TALIYAA: Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay qoraal garaaf ah oo laga yaabo in aanu ku haboonayn da' kasta.
Waqtiga akhriska ee la qiyaasay: 13 daqiiqo
Dulucda sheekada AOT waa cabsi ku filan - nin-cuna dad-cunayaal ah oo loo yaqaan kabaabirta Danta kaliya ee ay leedahay waa liqidda bini'aadamka oo dhan - waa riyo bilawga ah. Haddaba sidee bay tixdani u eegi kartaa burburka iyo ka sii muhiimsan falcelinta shaqsiga ah iyo dhibka jilayaasha taxanaha ah? Taasi waa waxa aan ku furfuri doono maqaalkan ee fadlan naftaadu is raaxayso marka aynu dhex galno aduunka dhiigu ku daatay ee derbiyada ka baxsan.
Armin wuxuu arkaa Titan
Aan ku bilowno bilowga Qaybta, halkaas oo daankaygu dhowr jeer hoos u dhacay, gaar ahaan inta lagu jiro qaybaha dambe ee dhacdada iyo dabcan dhamaadka. Daawashada waxa ku dhacay Eren's hooyadu runtii aad bay u naxday, wayna iga naxday.
La soco mar kale naxdinta buuxda ee Eren iyo Mikasa waayi:
Eren hooyadeed waxaa cunay Titan (Qaybta 1, Xilliga 1)
Bilowga sida cajiibka ah iyo qaraxa u dhaca ee dhacdada, dareenka ayaa durba si cajiib ah u socda, oo hadda wax badan ay khatar noogu jiraan. characters iyo bini'aadantinimada, way fududahay in la arko sababta tan taxanaha waxay heshay dareen badan markii ugu horeysay ee la sii daayay.
Laakin ma ahan taxanaha guud ahaan waxaan kaga hadli doonaa qeybtan balse waa wax aan sii ogaaday xilli ciyaareedkii ugu horeeyay. Waxaan maqaal shaqsi ah ku qori doonaa AOT dhawaan laakiin taasi waa maalin kale, ee la soco.
Raadinta fikradda ka dambeysa Titans
Titan ayaa hoos loo dhigay
Si aan u fahmo dulucda guud ee ku saabsan rajo-la'aanta gudaha AOT waa inaan eegno kabaabirta, laakiin ka sii muhiimsan naqshadooda. The kabaabirta gudaha Anime waa cabsi, in la yiraahdo ugu yaraan. Ujeedada kaliya ee ay ka leeyihiin waa in ay helaan oo ay cunaan aadanaha. Waa kaas. Xoolo kale iyo makhluuqa kale midna dan uma hayaan oo hal dan oo keliya ayay leeyihiin. Bilawgiiba waxa aanu aragnay sida ay uga cabsanayaan, sida ay dadka u ugaarsanayaan una cunayaan.
Kabtanka 2aad ee Vanguard Miche waxaa cuna 3 Titan
Waxaynu ka baranaynaa in kabaabirta ma xiiseeyaan Xayawaanka kale sida fardaha tusaale ahaan. Aadanaha kaliya. Tani waxay ka dhigaysaa iyaga in yar oo xamuul ah sababtoo ah sida caadiga ah fikradda wax sidan oo kale ah waxay noqon doontaa cadaw maaha kaliya aadanaha, laakiin adduunka.
Tani waa sababta oo ah, Bani'aadam ahaan, waxay sidoo kale qaadi doonaan mas'uuliyadda ilaalinta xayawaanka iyo bartilmaameedyada kale ee ay kabaabirta laga yaabaa in la soo jiito. Si kastaba ha ahaatee, taa beddelkeeda, waa bini'aadamka oo kaliya oo ay daba socdaan. Oo sidaas daraaddeed, waxaa jira oo kaliya 1 cabsi, iyo in la cuno by the kabaabirta.
Titan-kii cunay Eren hooyadeed ayaa soo muuqday.
Sidoo kale tan waxaan sidoo kale ka baranaa taxanaha oo dhan, qaybo yar oo macluumaad ah oo ku saabsan kabaabirta. Ma aha sida dhammaan macluumaadka iyaga ku saabsan oo jiritaankooda ayaa kaliya lagu daadiyay wada-hadallada qaar ee dhammaadka dhow halkaas oo aan dhab ahaantii ka ogaanno ujeeddadooda dhabta ah.
Jean waxa uu garwaaqsaday mas'uuliyadda hogaamiyenimo
Taa beddelkeeda, waxa nala quudiyaa qaybo yar oo ka mid ah halxiraalaha si aan si tartiib tartiib ah u dhisno nooc ka mid ah fikradda madaxeena iyaga ku saabsan, halkii aan la siin lahayn oo keliya in lagu quudiyo dhammaan macluumaadka muhiimka ah hal mar. Tani waa mid aad u fiican sababtoo ah ka hor intaanan xitaa u dhowaan dhammaadka Weerarkii on Titan, taageerayaashu waxay mar horeba madaxooda ku fantasyi doonaan waxa Titan-ka ujeedadiisa dhabta ah tahay. Dabcan, tani waxay sii kordhinaysaa baahida loo qabo in wax badan la ogaado.
Mikasa iyo Armin waxaa badbaadiyay Eren
Tani waxay ka dhigaysaa fikradda guud ee titanku mid aad u xun sababtoo ah asal ahaan, waxaan ognahay oo kaliya inta jilayaasha ah. Ma garanayno mar dambe runtii. Tani run maaha qaar ka mid ah muuqaalada aan caadiga ahayn sida dhamaadka 2 xilli, halkaas oo aan ku aragno waxa u muuqda Titan's abuure oo eegaya bannaanka xagga gidaarka. Waa hab wanaagsan oo lagu soo afjaro dhacdo waxaana hubaal ah in daawadayaasha ay is weydiinayaan waa kuma ninkan iyo sababta uu darbiga u daawanayo.
Crest ee Sahanka Corps
Su'aalo badan oo sax ah oo muhiim ah ayaa u baahan in laga jawaabo xilli ciyaareedka soo socda. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sababta cabsida kabaabirta runtii waa mid soo jiidasho leh. Waxaan baranaa marka ay jilayaashu bartaan (caadi ahaan) tani waxay noo ogolaanaysaa mararka qaarkood inaan xiriir adag la yeelano jilayaasha, gaar ahaan marka ay dilaan kabaabirta.
Wax kale oo laga hadlayo oo ku saabsan kabaabirta waa sida ay u socdaan sida taxanaha ah. Marka hore, waxaan u maleyneynaa inay cunaan dadka. Markaa waxaan ogaanay inay jiraan Titans kale oo ka duwan (the naag Titan) sidoo kale weerara kuwa kale kabaabirta marka ay jidka soo galaan. Waxaan sidoo kale baran in qaar ka mid ah kabaabirta leeyihiin kala duwan awoodaha iyo ujeeddooyinka.
Titans waxay ogaadeen halka Jean iyo kuwa badbaaday ay ku dhuumanayeen
Iyada oo ay la socoto aragtidan weligeed isbeddelaysa iyo aqoonta ku saabsan kabaabirta ee Weerarkii on Titan Caalamku wuxuu ku yimaadaa cabsi siman oo cusub oo la wadaago oo iyaga ku saabsan.
Ma jiraan kabaabirta yaa la dili karin? Ma jiraan kabaabirta kaas oo qodi kara dhulka hoostiisa fog? Ma jiraan kabaabirta yaa ka boodi kara hawada sare? - Bal eeg, waxaa jira fursado badan oo dhammaantood waa jiraan si siman argagax leh maadaama liisku sii socon karo oo uu socon karo.
Tani waa waxa ka dhigaya kabaabirta iyo hal-xidhaalahooda oo dhan aad iyo aad u soo jiidasho leh celceliska taageeraha Anime.
Eren iyo Mikasa waxay arkayaan Titan-kii hooyadood cunay
Titans-ku ma yihiin kuwo sii socda/mugdiyeedka Giants?
Waan hubaa fikradda a Titan hore ayaa loo abuuray laakiin hubaal maaha ilaa inta ay ku jireen Weerarkii on Titan. Waxay ku jiraan qayb iyaga u gaar ah oo daanyeerka ah, kana difaacaya in loogu yeedho "Giant", aad bay uga cabsi badan yihiin una hanjabaan. Waxay u muuqdaan inay ka caqli badan yihiin Giants fikradayda.
Macnuhu, mar kasta oo aan taxanahan wax ka baranno, waa sii madoobaanayaa oo sii madoobaanayaa. Tusaale ahaan marka Kabtan Laawi iyo Erwin ogow in ay dad dhab ah laynayeen wakhti kasta. Taasina kabaabirta waa bini’aadmi oo isu beddelay kabaabirta.
Jean wuxuu daawanayaa saaxiibkii oo Titans cunay
Mar labaad, tani waxay furaysaa su'aalo kale oo badan. Waa maxay sababta ama qof u rogaya dadka kabaabirta? Ma dadkaa la isu rogay kabaabirta shil? Dhammaantood kabaabirta xataa ogsoon yihiin kabaabirta? Waa maxay sababta ay u badan yihiin dumar la'aan kabaabirta? Ma garanayno oo tani waxay sii hurinaysaa gaajada aqoon dheeraad ah oo ku saabsan Titans.
2nd Vanguard Captain Miche waxaa cunay 3 Titan
Titans-ku waxay saameeyaan Bani'aadamka
Qodobka ugu dambeeya ee lagu daro kabaabirta Waxay sidoo kale noqon doontaa saameyntooda aadanaha. Mar dambe ayaan tan soo koobayaa laakiin ka qiyaas xanuunka, walbahaarka iyo jaahwareerka aad la kulmi doonto, adigoo si joogto ah u ogaanaya inay jiraan xayawaannadan sugaya inay helaan fursad ay ku cunaan adiga oo nool! Waxay noqon lahayd a cabsi leh Dareenka iyo fikirka si loo xaqiijiyo muwaadiniinta Kingdom.
Xubnaha Sahankii hore ayaa ka soo noqday derbiga bannaankiisa
Hadda, tani waxay noqon lahayd dareenka qofka caadiga ah ee gudaha ku jira Darbiyada Maria iyo gaar ahaan at Trost. Laakiin qiyaas sida ay u noqon doonto jilayaashayada ugu muhiimsan. Kooxda Sahanka. Ogaanshaha in lagu cuni karo wakhti kasta markaad derbiga ka baxsan tahay.
Adigoo og in haddii faraskaagu aanu aad u dheerayn, in adiga lagu cuni doono, oo aanu faraskaagu shaki la'aan sababin. stress iyo walwalka ka baxsan rumaysad. Lagu lammaaniyay a Hurdo la'aan, shuruudaha jilayaasha la geliyo runtii waa khiyaano iyo qallafsanaan. Waa la yaab leh jilayaashayada ugu muhiimsan xitaa inay sameeyaan 2 Season.
Titan ayaa daba galay gaadhi ay mayd ku jiraan
Titans ma ku raaxaystaan ​​cunista dadka?
Hadda, xaqiiqda ah in kabaabirta Bani'aadamku sidoo kale aad bay u niyad jabaan markaad u fiirsato sida ay u dilaan dadka oo u cunaan, ama si ka duwan. Sida laga yaabo inaad ogtahay, iyo muuqaalada qaar ka mid ah Naadi, dhab ahaantii waxay u muuqataa inay ku raaxaystaan. Aan sharaxo.
Muuqaalo badan oo aan ku aragno dadka oo la cunayo kabaabirta, hadalkoodu ma aha waxa aad filan lahayd. Qaarkood waxay u muuqdaan kuwo murugo leh, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa wajigooda ka muuqda dhoola cadeyn. Tan waxaa mararka qaarkood lagu beddelaa dhoola cadeyn xun, laakiin caadi ahaan waxay u muuqdaan inay eegaan ku faraxsan qaar ka mid ah asaasaqay hab nooc.
Titan-kii cunay Hooyadii Eren
Tani miyay ka dhigan tahay inay dhab ahaantii haystaan aadanaha ama shucuur kale? Mise kani waa weji ay si kastaba si joogto ah ugu xayiran yihiin safar aan dhammaad lahayn oo ugaarsi, socod iyo socod ah wax cunaya? Si kastaba ha ahaatee, waa shay aad looga naxo ay tahay inaad daawato, gaar ahaan tixgelin Titan kaas dilay Eren's hooyo ("Titan dhoola cadeynaya” sida lagu sheegay tixda).
Mikasa waxa uu garwaaqsaday in dadku ay leeyihiin aragti la mid ah Sahanka Sahanka sidii ay ku sameeyeen Qaybta 1
Sababtoo ah si kasta oo aad u eegto. Haddii sababta dhabta ah ee kabaabirta dadka cuna waa in ay dib ugu noqdaan bini'aadmi sida tixduba tibaaxday, haddaba maxay ugu faan iyo raaxaystaan? Aragtidayda gaarka ahi waa in badan kabaabirta waxay ku dhex mushaaxayeen dhulka Weerarkii on Titan in badan oo ay caajiseen oo quusteen.
Titan dheddigga ahi waxay nafteeda ka ilaalisaa werarada
Haddii aad ka fikirto hal ilbiriqsi, ma samayn lahayd wax la mid ah iyaga? Sideed ahaan lahayd fal si loo ogaado inaad hadda tahay a Titan naftaada? Sababtoo ah waan ogahay waxaan samayn lahaa.
Hadda, u sii gudba quusta aan eegno mid ka mid ah daqiiqadaha aan jeclaa ee ka xilli labaad. Tani waxay ahayd xilligii mid ka mid ah Vanguard uu la kulmay haweeneyda Titan. Marka hore, the Titan ma hanjabo haba yaraatee. Doorashada kaliya inaad raacdo jilayaasha qaarkood. Laakiin waxaan si degdeg ah u baranaynaa in Dheddig Titan Dhib malahan wax kasta oo dila qof kasta oo bini'aadan ah oo ka hor istaaga in ay dhamaystirto ujeedadeeda guud.
Titan oo cunay Eren hooyadeed ayaa soo muuqday
Sida shucuurta loogu ciyaaro 101
Hadda waxaa jirta daqiiqad uu 1 askari oo ka tirsan Vanguard uu nolosha ka dhigay. Waxa uu ku socdaa sida ugu dhakhsaha badan si uu uga digo habka intiisa kale ee ku saabsan waxa uu hadda arkay. Waxa uu marqaati ka ahaa guuldarada buuxda ee soo gaartay kooxdiisa oo dhan, wuxuuna u maleynayaa inuu yahay ka kaliya ee soo haray. Waa waqti cabsi badan, laakiin waxaan dareemeynaa nafis iyo raynrayn sababtoo ah waxaan u maleyneynaa inuu ka tagi doono oo uu u digayo kuwa kale, sida uu isagu leeyahay.
Waxaan runtii u malaynaynaa inuu dib ugu celin doono kuwa kale oo uu u sheegi doono waxa uu hadda arkay. Waxaan ka fekereynaa taas Eren Tani way baran doontaa oo qaadan doontaa Gabadha Titan. Laakin marka uu dhammeeyo xukunkiisa, wax baa dhacaya. Dabadeed – hooh…. Wuu baxay. Kor loogu qaaday hawada, dib looma arkin.
Gabadha Titan-ka ah waxay tixgelisaa Reiner
Ma aragtaa waxay halkaas ku sameeyeen? Kaliya waxay qaadataa hal daqiiqo laakiin wakhtigaas aadka u yar, waxay ku qaateen shucuurtaada roller coaster. Dhismaha hal dareen ka dibna si buuxda garaacis la mid kale. Waa dhalaalaya! Waxaa jira wakhti badan oo AOT ay tan sameyso oo ay had iyo jeer isticmaalaan kabaabirta si ay u sameeyaan.
Taasi waa hadda!
Waxay ahayd wax cajiib ah kala qaybinta iyo qiimaynta kabaabirta. Weerarkii on Titan Runtii waxay ahayd Anime aad u wanaagsan in la daawado waana hubaal mid ka mid ah ugu fiican Naadi Waxaan ku arkay Anime daawashada safarkayga. Si aan u hubino in maqaalkani aanu aad u dheerayn waxaanu u kala gooyn doonaa laba qaybood oo aanu qaybta xigta dhawaan soo gudbin doonaa. Fadlan subscribe saar warsidahayaga si aadan waligaa u dhaafin wax cusub oo aad lasocoto markasta oo aan soo galino maqaal cusub Waxaad sidan ku samayn kartaa hoos:
Weerarkii on Titan waa taxane muddo dheer oo soo socda lagaga hadli doono View Cradle. Aad baad ugu mahadsantahay akhriska, ha ilaawin inaad subscribe dhahdo si aadan waligaa u seegin wax cusub, maalin cajiib ah u hayso oo aad badbaado u ahaato!
Gelitaan Hore Halka laga akhriyo Manga-saaxiibti-A-saaxiibteed
Gelitaanka Xiga Muuqaalka Dabeecadda Yame Yukana